I-COZY sauna house getaway yothando 14km fromVilnius - I-Airbnb
I-COZY sauna house getaway yothando 14km fromVilnius
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis, i-Lithuania
Indlu encane ibungazwe ngu-Inga
U-Inga Ungumbungazi ovelele
Uma ufuna indawo yokubalekela impilo yedolobha ematasatasa ngempelasonto noma ngaphezulu, siyakwamukela endlini yethu encane ye-sauna - indawo ethokomele esanda kwakhiwa endaweni enhle yemvelo eqhele ngamakhilomitha ayi-14 ukusuka enkabeni yedolobha laseVilnius!
Le ndawo inombono ophumuzayo wechibi nemvelo enhle unyaka wonke.
Esitezi esingaphansi kwendlu kukhona indawo yokuphumula, ikhishi elincane, indlu yokugezela, i-sauna kanye ne-attic - igumbi lokulala.
Sebenzisa (isikhathi esisodwa sokushisisa ubuningi obungu-3h) kwe-sauna yangasese eyengeziwe engu-30EUR ekhokhelwa lapho ufika.
Ngenkathi uhlala endlini yethu encane ungajabulela ukuba ngaphandle, ukudoba, ukuphumula elangeni ezindaweni ezinkulu ezimnandi, ukubhukuda, i-barbecue phambi kwechibi kanye ne-sauna :). Ngaphandle kwalokho, kunendawo yomlilo eyenziwe ngokhuni ngaphakathi, zipholele embhedeni onokubukwa kwechibi okumangalisayo, isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi asinazo izindleko ezengeziwe. :)
Ekhishini elincane uzothola zonke izitsha ezidingekayo namathuluzi wobuciko bakho be-Culinary. Isiqandisi esakhelwe ngaphakathi ngaphansi kwendawo yokusebenza, i-hob yokungeniswa isekhabetheni eliphansi lekhabethe lasekhishini.
Kukhona inkokhiso eyengeziwe ye-sauna, intengo yayo (amahora angu-3, amathawula e-sauna, ama-slippers, amafutha aphunga) 30EUR, ekhokhwa lapho ufika ngemali.
Uma ufuna indawo yokubalekela impilo yedolobha ematasa ngempelasonto noma ukuphumula isikhathi eside, sikumema ku-sauna yethu encane - indlu ethokomele esanda kwakhiwa ezungezwe imvelo enhle, kuphela amakhilomitha ayi-14 ukusuka enkabeni yedolobha laseVilnius!
Amafasitela e-sauna anikeza umbono omuhle wechibi, onganconywa unyaka wonke.
Esitezi esiphansi kukhona indawo yokuphumula, ikhishi elincane, igumbi lokugezela, i-sauna kanye negumbi lokulala elingaphansi kwe-attic.
Ngenkathi uhlala e-cottage ungajabulela ukuhlala kwakho ngaphandle, ukubhukuda, ukudoba, ukuphumula elangeni noma emthunzini wamasimu amakhulu anethezekile, ukosa ama-barbecues ogwini lwechibi futhi, kunjalo, ne-sauna :). Futhi, indawo yomlilo ngaphakathi, ubuvila embhedeni onokubukwa okuhle kwechibi, isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi ezifakwe enanini :)
Ekhishini elincane uzothola zonke izitsha ezidingekayo namathuluzi wobuciko bakho be-Culinary. Isiqandisi esakhelwe ngaphakathi ngaphansi kwe-countertop, i-induction hob isekhabetheni elingaphansi lekhabethe lasekhishini.
I-sauna ikhokhwa eyengeziwe, intengo yayo (ukushisa amahora angu-3, amathawula okugeza, ama-slippers, amafutha aphunga) 30EUR, ikhokhwe ngokheshi.
Nginikeza izivakashi zami indawo kodwa ngiyatholakala uma ngidingeka njengoba ngihlala eduze.
UInga Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Vilniaus rajono savivaldybė namaphethelo